Ogaden News Agency (ONA) – Iraadadii Shacabka Gaza oo ka Guulaystay Aaladii Dagaalka Israa’iil
Posted by Dayr	/ August 27, 2014
Dagaalkii socday 51ka maamlin ayaa xalay 7dii Fiidnimo waqtiga Gaza la joojiyay. Isla markiiba waxaa dabaaldag iyo damaashaad isugu soo baxay shacabkii Gaza iyagoon u kala hadhin caroor iyo ciroole, rag iyo dumar. Waxay dhamaantood ku dhawaaqayeen – Guul .. Guul. Waan ka adkaanay Israa’iil .. wuxuu ahaa dagaal u dheaxeeya shacab caalamka u heshiiyay in la jabiyo hankooda iyo rabitaankooda xoriyadda oo hubka laga dhigo. Hasa ahaatee way diideen shacabka Gaza inay hubka dhigaan waxayna yidhaahdeen waxaad doontaan sameeya, lagamase yaabana inaan qoorta u dhiibano Yuhuuda.
Sidaan la socono waxay Israa’iil cunaqabataynta saartay Gaza 2006dii markay Xamas ku guulaysatay doorashooyinkii la qabtay oo caalamka uu qiray inuu ahaa doorasho nadiif ah. Hasa ahaatee, dawladii Israa’iil waxay ka dhigatay fursad ay la sugaysay, gaar ahaan markii ay Xamas iyo Fatax ku dagaalameen Gaza oo Xamas ay ka saareen ciidamadii Maxamud Cabbas raacsanaa ee Masar iyo Mareykanka ay tababareen, ayay Israa’iil oo qorshahaa wax ka dajisay waxay ka xidheen dhamaan xuduudihii ay lahaayeen ee Dhulka, Badda iyo Cirka. Sidoo kale Masar ayaa iyadana xidhay albaabka u dhexeeya ee Rafax. Waxaa ku raacay in xayitraadaa la saaro isbahaysigii loo bixiyay Afargees – The Quartet – oo ka koobnaa; Qaramada Midoobay, Mareykanka, Midowga Yurub iyo Ruushka. Laga bilaabo taariikhdaa 2007dii waxaa saarnaa Gaza xayiraad aan caalamkan casriga ah horey u arag. Waxaa lagu heshiiyay si aanay u dhimanin dadka ku nool Gaza in albaabada Israa’iil kolba wax looga soo daayo. Waxaa marmarka qaarkood loo diidi jiray inay soo galaan alaabta ay ka midka yihiin; nalalka, joodariyada, maryaha lagu seexdo, shukulaatada, shaambada iyo kuwa ilkaha lagu sifeeyo iwm. Ujeedada waxay ahayd in shacabka gaar ahaan caruurta ay ku dhacaan cudura aan la daaweyn karin, iyadoo waliba bulaacadihii la waayay wax ka nuuga qashinka oo jidadka xaafadaha ay dareerayeen.
Cuna-qabatayntaa naxariisdarada ah way diideen ree Gaza inay u hogaansamaan wixii laga dalbanayay oo ahayd inay ka tanaasulaan mabda’ooda oy wax ka badalaan xeerkooda oy ogolaadaan in Yuhuuda ay dalka Falastiin xaq u leeyihiin, inay hubka dhigaan oy noqdaan shacab ay Israa’iil siday doonto ka yeesho sida Daanta Galbeed (West Bank) ee maamulka Maxamud Cabaas.
Taariikdaa kooban ka dib; dagaalkan socday labada bil ku dhawaad wuxuu muujiyay adkaysiga shacabka Gaza iyo geesinimada dhalinyarada Xamas oo caalamka ka yaabiyay, ilaa uu Jeneraal Yuhuuda ah yidhi; Israa’iil waxay rajayn lahayd inay hesho laba katiibo (battalion) oo Xamaas la mid ah.
Marka la fiiriyo khasaaraha soo gaadhay shacabka Falastiin ee Gaza waa mid aad u balaadhan. Dhimashada waxaa ilaa hadda la hayaa 2143, dhaawacana 11,000. ugu yaraan 100,000 ayaa hoy la’aan noqday. Meesha Israa’iil ay ka dhinteen 64 askari iyo 5 shacab ah. Marka labadaa la’is barnar dhigo, waxaa la yaab noqonaysa inay Xamas u dabaadagaan Guul, Yuhuudana ilaa hadda ay la fooraraan Guuldarro, iyadoo la qirayo inay siyaasad ahaan uga dhamaatay dalka Israa’iil R/wasaarahooda Natanyaho. Sababta waxaa soo koobay joornaalka ugu caansan dalka Israa’iil ee la yidhaahdo Haaretz oo qoray sidan;
” Nitanyaho iyo kooxdiisa waxay u keeneen Israa’iil guuldarro dagaalkii dhex maray ciidanka ugu xooga badan gobolka iyo Urur ka kooban 10,000. Guuldarro oo kali ah ma’aha midan. Waa burbur.”
Waxaa ku raacsan damaashaadka iyo dabaadagga ay ku jiraan ree Gaza dhamaan shucuubta caalamka ee xoriyadda iyo cadaaladda jecel oo shacabka S.Ogadenya uu ugu horeeyo.
Sii Akhri ..